Andrea Pirlo: Hadii Juve Ay Ku Guuleysato Champions League Waxaan Timaha U Jaran Doonaa Sida Balotelli. - jornalizem
Andrea Pirlo: Hadii Juve Ay Ku Guuleysato Champions League Waxaan Timaha U Jaran Doonaa Sida Balotelli.
Xiddiga khadka dhexe ee Juventus Andrea Pirlo ayaa sheegay inuu timaha u jaran doono sida Mario Balotelli hadii kooxdiisa ay xilli ciyaareedkaan ku guuleysato Champions League.
Juventus ayaa ku soo laabatay tartanka Champions League ka dib fadeexadii Calciopoli, iyagoo xilli ciyaareedkii hore ku guuleystay horyaalka Serie A.
“Inaan ku guuleysano Champions League waxa ii tahay riyo rumowday aniga iyo kooxda iyo asxaabteyda kooxdaba. Hadii ay dhacdo waxaan timaha u jaran doonaa qaabka Mohican oo ah sida Balotelli!
“Barcelona iyo Real Madrid ayaa ugu cadcad inay ku guuleysyaan. Inaad tiirada saarto tartamada yurub waxa ay qaadeysaa wax ka mid ah awoodaada jir ahaaneed iyo maskax ahaaneed, halka safarka kaliya uu ka dhigay mid daalan. Waxa ay kugu qaadaneysaa inaad si xoogan diirada u saarto islamarkaana aad heysato koox ka kooban ciyaaryahano badan.”
Pirlo ayaa sidoo kale ka hadlay dhaleeceynta ka imaaneysa tababarayaasha qaar ee ka soo horjeeda Juventus sida tababaraha Roma Zdenek Zeman iyo tababaraha Napoli Mazzarri, waxaana Pirlo uu aaminsan yahay guulaha ay gaareyso Juve kaliya ay sababeyso weerarkaas kaga imaanaya kooxaha ay la tartamayaan.
“Zeman waa tababare special ah, waa muran jecel. Waa tababare weyn kooxdiisana waxa ay u ciyaartaa si wanaagsan. Mar walba waxa uu sheegaa waxyaabo qariib ah, lakiin taasi waa dabeecadiisa, waana aqbaleynaa taas.
“Mazzarri isaga waxa uu u hadlaa sida nin laga badiyay. Marka lagaa badiyo waa wax iska caadi ah inaad xagxagato cid walba madaama ay niyadjabsan tahay lakiin waan u baranay dagaalka afka ah. Juve waa kooxda ugu caansan, malaha adduunka, iyadoo leh taageerayaal badan, dad badan ayaana rajeynaya inaan guuldareysano. Waa wax iska caadi ah in lagu soo weeraro marka aad badineyso.”